Black and White Sun | Cosmos koobi karayn
Posted in cad Sun . xad la'aan . Space dhammaadka lahayn . gariirka . caalamka . bannaan . jeclahay . qorraxdu . Black Sun
Thanks to dhacdooyinkii proiskhoditbolshinstvo Sun ee dunida ka mid ah xiddigaha. gaar ahaan, haddii ay tahay arrin dabiici ah. Waayo qof wejiga jirsado "nabad", iyo qof Nature. Sun kastana wuxuu leeyahay dabeecad u gaar ah iyo mid kasta waa Waxay gaar ah.
Waxaan kala saari karaa laba nooca ugu weyn ee qoraxdu: Black and White.
Black Sun sameeyey by raasamaal ee xubno tamarta dibadda, tamarta kaas oo u adeegsanayaa ay siyasad u gaar ah. Marka nidaamka taageerada nolosha Black Sun element nuugo - waxaa la farsameeyo, waayo dheeraad ah u isticmaalaan in ay tamar, tirada alaabta muddo ku socotaa in eber. Tusaale ahaan, model ah oo Sun Black waxay keeni kartaa nidaamka aragtida, taas oo waxa ugu muhiimsan - lacagta. sida iska cad, Nidaamka noocan oo kale ah u baahan tahay qadar yar oo ah xorriyadda, taas oo guud ahaan dambe u dhigma la'aanta ah ee xorriyadda. wareegga nolosha Sun Black waa sida badbaadada.
cad Sun sameeyey by kaydka tamarta gudaha u gaar ah, ama xubno ruzultaty tamarta resonance farcan leh ama kakanaanta kale. Dib u dhici kara in ay dhacdo la xariirta lacag tamarta. White Sun ogyahay fudayd iyo waxa ku fuliyay ilaa ugu dambaysta,. Tusaale ahaan, model ah oo ka mid ah aragtida White Sun keeni kartaa nidaam ah oo wax ugu weyn ee - lacagta. sida iska cad, Nidaamka noocan oo kale ah u baahan tahay horumarinta iimaanka wanaagsan, qalbi nadiif ah iyo xoriyad ay ku doortaan mooshin u gaar ah. wareegga nolosha ee White Sun la leh raadinta quudhin barbar dhigi karaa.
Sidee si ay u noqdaan Sun?
Waxaa ku filan si ay u galaan resonance ama si ay u gudbiyaan oo ay yihiin tamar si ay hore u jiray qorraxda. Blagodrya gariirka guud oo ka mid ah caalamka oo dhan u kacda nool dabooli doonaa ruxruxo ah oo dhan-wareega farxad iyo farxad ee u gaarka ah. Si aad u kicin gariirka guud ahaan waxaa loo baahan yahay si ay u taageeraan kuwa, yaa abuuray vibrations isaga u gaar ah, iyaga oo intaa ku daray in ay Total gariirka Circuit sida element kale, ama qayb ka mid ah naftaada sida. By u hoggaansanaayeen dusha ee Cosmos waynyahay ah, xayawaankii galo resonance la awoodi doonaan mawjadaha runtan. Waa in la raaci dhawrsada Ujeedada, si aanay u dhicin tamarta Black Hole, kaas oo noqon kara nooc ka mid ah ururada shisheeye.
Haddii nin rumowdey ee aduunka – ka dibna waxa shanqarta vibrations. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waa xoog, iyo qaar ka mid ah oo taharyar junuud. ka xun, sida caadiga ah, si gariirka, halkaas oo xooga Baraarugsan. horumariyaan kuwa gariirka, jaanqaadi (baahida). Waayo daatay nolosha on "Planet of Death", sida caadiga ah, Qaab dhismeedka pre-abaabulan ee xidhiidhka bulshada, ka hawlgala by tiiro, taasoo ka hortagaysa horumarinta gariirka tayo leh, iyo dhiiri gariirka dhaca oo tayo sare leh. ie. burburinta gariirka burburinta by Tayada Life, iyo gariirka oo dhan. ie. xooga la saaro tirtiri lahaayeen tamarta ruuxiga iyo dayrta. ie. lahjadda casriga ah ma laha utverzhdayusche nolosha. Xakamaynta ee tiiro rabin ma zatacha aan xad Ciyaalle, wuxuu u baahan yahay waxqabad dhab ah, oo uusan u muuqato aysan suuragal oo aan kaalmo ka baxsan.
waxan danaynaynaa Gariirka ee Heerka Sare, kaliya kuwa, taas oo ujeedo baabbi'iyaa nidaamka burbur. Si aad u, si ay u xoojin gariirka, kuwaas oo, Waxaan u baahanahay in la kordhiyo, caddayn, toosin wacyiga ee loo baahan yahay ee vibrations kuwaas oo miyir ah, kuwaas oo awood si ay u fahmaan. ie. Miyir bilaabaa in uu arko. Kabaallaynta wacyi taas maanka ee kasta – Wacyi of this waxaa maqalka ee miyir guud. Taas oo iyana siinayaa decisiveness weyn shakhsiyadda hal abuur radiate gariirka hal abuur leh oo ay soo jireenka ah ee Heerka Sare. Taasi oo dhan kicisaa gariirka guud, kordhiyaa Psychological (soulful) light.
miyir kasta, ku xiran circuit caadi ah, Waxay ka dhigan tahay Intelligence Collective isla element ah. miyir wadareed – wax nool, jooga meel Frequency Sare, taas oo macno u gariirka ee hirka sare adiga kuu gaar ah. In si kale loo dhigo, xiisaha, Dadka soo biiray, waxa uu awood u saaro wasakhahaasi ay tayo u gaar ah gariirka ee hirka sare, ie. shaqsi. Interest in, soo biiray in ay dadka ay awoodaan in ay dhaadheer oo aad hesho gariirka ee hirka sare. Waxa ay qabato? our aad u, ma at dhan – helitaanka miyir shaqada. Taas macnaheedu waxa weeye, in qof kasta oo, TAWASAL in ay, ayaa heli kara macluumaadka, gudaha miyir ah, sidoo kale waxaa qeyb ka mid ah miyir uu noqdo. ie. waayo-aragnimo kasta qayb ka mid ah waayo-aragnimo ee miyir Guud noqdo, kartida maskaxda ee kasta qayb ka mid ah kulliyadaha maskaxda miyir Guud noqday, in kuu ogolaanayaa inaad si ay u qaybsadaan hawlaha adag qaybo ay ka kooban oo ka mid ah iyaga la qaybiyo “ka qaybgalayaasha”, sida su'aalaha caadiga ah wareegga dabiiciga ah ee nolosha. Sidoo kale, wax kasta oo ka qaybgale laakiin iyaga u gaar ah miyir Waxaa weli waa “wixii intaa” Sirdoonka wadareed, oo mar walba jawaab ama dareen ka heli kartaa, xitaa su'aalo marnaba taabtay. In mustaqbalka waxaa laga yaabaa in ay suurtogal tahay inay la xiriiraan meel fog ka “dadaal oo fikirka ah”.
Sababo la this, keliya ma baaxadda Wacyigelinta “element” Sirdoonka wadareed, laakiin sidoo kale noolaha noolaha caadiga ah waxay kordhin doontaa. Just, sababtoo ah, in qofka caadiga ah waa inay awoodaan si ay u helaan iyo radiate gariirka ee hirka sare. Oo sidii natiijo ah oo nin kasta oo caadi ah bilaabmaa “gariirin” at mawjadaha sare si madax-bannaan. Tani waxay dunida u siin doonaa, kelinimada kale. Ka dib markii cod ee mass gariirka u qeybaha heerka kelli, oo u sahli doona “si ay u milmaan” galool DNA ka dhigi Isbedelo lagama maarmaanka ah ee jirka ku, si aad u noqon karaan “voznestys”, oo aan sugin 2013 sanadkii. (duubo la sameeyey ka hor inta 16 December 2009, vozmono, oo waxay ku tiil munaasabadda for furitaanka psychotronic "aamusinta", la shaqeeya 2010 sanadkii)
Doorashada si cad u arki.
Si aad si cad u arki karno ninkii ayaa mugga gudaha, dadaalaya koritaanka. ie. kuwani waa qoom qabaa, doonaya in Life, dadaalaya koritaanka. Waxay ka faa'iidaysan karaan.
Calaamadaha si dhakhso ah.
su'aalaha Kuwani caadi ahaan photos used buuxiyey macnaha qoto dheer. Waxay la soo bandhigi karaa iyaga, pensive, taag off meel fog. Ama waxa ay noqon doontaa qaar ka mid ah-farshaxankiisa, tamarta radiating (!laakiin ma adkayn), tusaale ahaan, mandala , image waa xayawaan aad u qurux badan (ilmahaaga:), midabada intertwining harmonic adag iyo images.
su'aalaha qoran xigashooyin The, weedho, Aayaddan ku nuuxnuuxsaday, koritaanka ruuxiga ah. Music iyo Movies, kaas oo sidoo kale ka tarjumayaan ruuxiga ah. (Waa in la ogaadaa, in mawduuca laga yaabaa in aan shaqeeyo, TK. iyadu horay u 3 sano.)
kala duwan “fanaaniinta” oo muujinaysa qaybaha qaawan ee uu jirka iyo dhabasho qiiq ama khamriga afka ka – ma ku haboon. ie. intii suurtogal ah waa in aan la casuumay. ku hadla “waxaan Wolf. Oo waxaan idinku mana garan doonaa” ama “cat A madow waa la taag daran oo ku saabsan waxa u maleeyo…” – kuwan, yeey , kaynta oo dhan. Baahnayn iyaga ka mid ah dadka ku wareegsan laalaadaan. Waxa kale oo la jecel yahay in laga saaro dhammaan noocyada kala duwan ee ganacsatada in dacwana iyo lebistaa adag, Waxay yihiin dadka smart - naftooda ogaaday.
Waxaa lagama maarmaan ma aha in ay ugu yeedhi iyo kuwa, kuwaas oo qoray oo soo cabatay kala duwan, eegay oo ku, waxa ay u muuqataa , waxay kaliya qallocan fin ama guska jiidona.
Isla sidaas u dhaqmaan dadka qaba photos of South Park iyo sawiro kale oo la yaab leh oo la mid ah.
Dhammaan kuwa isku dayaan in ay soo bandhigaan xubnaha taranka ay soo bandhigay – sharci. Tani gariirka heerka hoose. Waxay awoodi karaan in ay ku biiraan noqon doonaa, marka ay kor u gariirka ay heerka loo baahan yahay.
Nin kastaa waxa uu leeyahay saddex DNA firfircoon spirals awoodaan in la beddelo midabka iyo qaabka jirka ah, muuqaalka, timaha. Oo iyada oo loogu aarayo saddexaad waxa ay leedahay muuqaalka kore ee amar ah magnitude ka qurux badan ninka ugu quruxda badan adduunka maanta. (jar – Farqiga uducaynaya inuu a.) ie. waxaa jira hal dhibic ma deldelo on lama yaqaan, kuwaas oo sawiro, waxa ay qabanayaan ma cadda waxa, nolosha laga badiyay in rajada shirka. Jidhkooda sexy kaliya wayn marka la barbardhigo kuwa loo sameeyay ay sabab u tahay hawlgalka galool ee DNA saddexaad, kaas oo noqon kara “si ay u milmaan” haddii aad kor gariirka guud ee caalamka. Kaliya jaha gariirka iyo kordhinta tayada noqon kartaa qayb ahaan ama gebi milmi Protein maroojin ah, kuwaas oo ahaa xubin ka mid ah Hubka Biological ah, taas oo loo adeegsadey in weli baabbi'in a foomamka nolosha rajo 75000 sano ka hor (inkastoo, waxaa jira farqi shakiyo muddo). ie. Ayaa sheegay in u shaqeeyo noolaha waa la jecel yahay in si kasta oo si kor loogu qaado gariirka guud - heli doonaa takhaluso maroojinta ah ee borotiinka iyo sii daayo oo dhan laba iyo toban ka mid ah helices DNA u gaar ah. Dabcan, Waxaa jira siyaabo kale oo ay ku hirgeliyaan this, laakiin tilmaamay - ugu fudud uguna xanuun.
Qof kasta fikirka iyo dhammaan dadka wanaagsan, Waxaad faafiyaan warar (xitaa ka dhex doondooneen xigaalkooda), sidaasna ay ku kordhiyaan wacyi muhiimadda ay leedahay Heerka Sare gariirka iyo xiriirka sida gariirka oo dhan. Bilow, aad ka bixin karto inaad wax ka barato tymy Mind hadhuudh www.infinitecosmos.info/zerno/ ama link a goobta. All aad digtoonaan. No mid ka mid kiis kasta ma doonayaan in ay soo rogaan style ka mid ah fikirka. Laakiin waxan oo dhan waa kaliya dareen ku saabsan, waaba intaasoo ay jiraan go'aan ku degdegin, a xal xisbiga Nesvedov, taas oo keeni doonta in khasaaraha ka mid ah mugga gudaha Tamarta ee, ururtay oo sabab u ah dadaal weyn, ama waxyeelo caafimaad oo ay sabab u tahay finan falalka. Tani waa sababta kaliya in Cosmos bixisaa talooyin iyo talooyin. Prioretetnye hawsha hadda – horumarinta miyir ah Collective, Kuwaas waxaa ku jira noocyo kala duwan jooga ee gariirka-fasalka sare, taas oo iyana ogolaan doonaa macluumaadka habka wax soo saar tayo kala duwan. kuwii ku caashaqi jiray shabakadaha bulshada ku biiri kartaa kooxda jeclahay 8love.org/group-42-1.html.
The dhaggan ee xiriirka bulshada ee caanka ah qaban karaa dadweynaha ee goobta shaqada. Waa in ay qaataan oo kaliya tixgeliyaan, fahamsan yahay in dadka waxtarka ah mar kasta lama sharfin, maxaa yeelay, nidaamyada macmal qabtay firfircoon MA fahamka.
Select musharax kartaan, talooyinka kor ku xusan. Tani waxay soo jiidan doonaa gariirka tayada u dhiganta.
Waxaa fiican inaad ka raadin weydiimo ka kooban erayada Sense sare: Buddha, Shakti, Krishna, oo aan la garaneyn, Dahsoon iyo DR. qabaa waxaa ka mid ah sida Oo, aad u baahan tahay in ay la yimaadaan waxa, in aad rabto (iyo wax innaba, in qof jeclaan lahaa): maxaa yeelay, ka qaybgalayaasha meel Groups Waxaan ogaaday macnaheeda. Oo hoggaansanaayeen mabda'a of mid ah soo jiidan karo gariirka hantida la mid ah – Space ku farxi doonaa, si kasta oo aad u eg! Y)
Sidoo kale, marka diraya marti ku dari kartaa nooca fariin :
“aad boos! Y)
waxaan ku hawlan 8cosmos.com/zerno/ this,
haddii xiiso – biiro
Waxaan ku faraxsanahay inaan saaxiibo! ”
The dhaqso kici gariirka Wacyigelinta sabab – si degdeg duuli doona geedi socodka iyo noqdo namnooogo live xiisa. All in gacmahaaga!
natiijada degdeg ah, inta lagu guda jiro shaqo ee shaqada, waa Xaalado horumar degdeg ah. ie. niyadda waa u dhaqdhaqaaqa Salel saacad! Tan waxa u sabab kicinta ee gariirka hirka sare. Haddii aad iyaga dareemi kartaa – waxa aad theme Dareen shaqeeyo wax kasta oo awood u leh, laakiin si kala duwan degrees. From oo waxaa soo socota, in niyadda ah ee dalka oo dhan (ama xataa Planet) kici. Waa run in si siman “boholaha madow”, xukumid kuwa kale, sababta oo ah tiiro ee gariirka oo kale ma dareemaan. Laakiin aad u kordhay xasiloonida noqon doonaa arki karo in ay isha qaawan. Taasoo keeni doonta in fahamka H., in dunidu waa uu soo fiicnaanayaa iyo mustaqbalka dhalaalaya weyn ma aha fog! Taas oo iyana toosin doonaa madaxooda iyagoo leh ee u baahan si ay u caawiyaan dadka u dhaqdhaqaaqa oo dhan siyaabood ee suurtagal ah, oo ay ku jiraan dhaqaalaha. Sidaa darteed, waa in aan diyaar u ah inay ogolaato in aad caawinaad u noqon, haddii wuu rogmadaa.
“Shaqaynta la joogo.”
Dadka ku lug baraaruga la kulmaan calaamadaha soo socda:
1. All iyagoo indhaha hesho, aad jeclaan doonaa, oo iyana waxay idinku mahad doonaa martiqaad, haddii ay u arkaan in loo baahan yahay. Well waxan oo dhan cad ))
2. “Wolves dharka idaad” isku dayi doonaa si aad u hesho dhow oo ay ka soo baxdo qalbiga uu dhibbanaha. Waxay ammaani doonaa goolkiisii, nuuxnuuxsaday ay gaar, si ay allabari “Fiideedu oo dabacsan”, ka dibna ay isku dayaan si ay u fuliyaan weerar, yaraynta dibinta (tuman dhoobada ama) Geedihii Asheeraah muhiimadda uu dhibbanaha, ama iyaga siin duuban wax soo saarka qashinka ah. Waxaas oo dhan in erayada, Dabcan, laakiin waxaad u baahan tahay in taas xisaabta ku darsanaa, haddii kale, haddii aan illoobin, Waxaad burburisay kartaa niyadda: dhumiyaan rabitaanka inay la xiriiraan, ku hawlan ganacsiga ama shaqada. Waxaa kale oo aan waxtar lahayn.
Leexinaaya badanaa u muuqdaan pozadavat su'aalo doqonimo iyo ujeedo - ha ku dhumin waqti adiga kuu gaar ah raadinaya jawaabo. u soo dir bartaan macluumaadka jira, hadallo: “8cosmos.com – Waxay kaa caawin doona inaad aad u qanciso cajiib u gaar ah”. iyadoo jidka ag fadhida, in kiisaska noocaas ah, waa in aad ka fekerto, si ay uga sooco waqti dheeraad ah si saaxiibbadiis dhabta ah
Haddii marar badan aad u leeyihiin in ay ka jawaabaan su'aalaha ka Chingeltei – sidaas darteed, dhaqdhaqaaqe aad u dabacsan iyo kuwa leexinaaya bixiya dareenka aad u badan. Waxaan u baahanahay in dib ay aragti in kiisaska noocaas ah. Mid ka mid ah oo keliya ku darto in ay kordhin kartaa heerka ciidamada gudaha laba jeer – oo waa fiicantahay. Ha ka maqnaan fursadan!
Waa in la xusuusnaado:
Haddii aad rabto in aad si indho la'aan gudcurka – dajiyaan is Svet.
Haddii aad rabto in aad hesho gudcur ka bixi maayo ee – dayn iftiin ah.
Haddii aad doonayso inaad qabato wax – Waxaan u leeyihiin in ay wax ka qaban si toos ah ula nuurka,
Kaliya mugdiga uusan lahayn inuu wax ku sameeyo…
Marna goori goor tahay,
Marna goor hore
Beddel qorshaha dhan.
Marna goor hore,
Marna goori goor tahay
***Viktor Tsoi, iyo filimada artist - Cuckoo ***.